Ku qor taariikhdan jadwalkaaga: Maarso 23-keeda. Dhacdooyinka Apple (ama maahan) | Waxaan ka socdaa mac
Xanta ayaa durba bilaabatay goorta Apple ay qaban karto dhacdadii ugu horreysay ee sanadkan 2021. Falanqeeyayaasha badankood waxay aasaaseen bisha Maarso inay tahay taariikhda suuragalka ah ee dhameystirka. Hadda, falanqeeye Kang wuxuu doonayaa inuu sii adkeeyo saadaasha sii badinaysa wuxuuna ku dhiiranayaa inuu sheego in munaasabadda Apple la qaban doono soo socota Maarso 23, Talaado. Dhacdo onleenka ahaan doonta sidii aan horay ugu baran jirnay sanad.
Sida laga soo xigtay macluumaadka uu bixiyay falanqeeyaha Apple, Kang, Iyo iyada oo loo marayo dunrui, Waxaa la xusay in dhacdada qof walba uu ka hadlayo ee la qaban karo bisha Maarso, ay noqon doonto maalinta xigta 23. Munaasabaddan iyo sidoo kale khadka tooska ah, waxay u badan tahay in shirkadda Californian ay bulshada ku soo bandhigi doonto diyaaradaha caanka ah ee Airtags. , IPad-yada Next-gen iyo kuwa aadka loo hadal hayo Jiilka saddexaad ee AirPods.
Qiyaasta ugu horreysa waxay soo jeedisay in dhacdadu ay dhici karto toddobaad gudihiis. 16-ka Maarso ee soo socota. Laakiin saadaashan waxaa iska tuuray Mark Gurman laftiisa de Bloomberg, isagoo ka tagaya albaabka munaasabad dabayaaqada bisha. Kang ayaa sheegay in dhacdada Apple ay dhici doonto isla taariikhda qalab kale oo tartamaya la soo bandhigi doono, gaar ahaan OnePlus 9. Markaanu eegno taariikhaha, waxaan ogaanay inay markaas noqon doonto Talaado, Maarso 23. Dhibaatada caafimaad ee adduunka awgeed, munaasabadda Apple ayaa la filayaa loo xuso qaab dijitaal ah waxaana si toos ah looga sii daayaa degelkeeda rasmiga ah iyo kanaalka YouTube.
Saadaalahan uu sameeyay falanqeeyahaani ma ahan kuwa meesha ka baxsan. Anaga oo tixgelinayna in aan hada 8 jir nahay Applena aysan wali shaacin waxna ayna caadi tahay in ay sameyso uguyaraan usbuuc kahor, waxaan horeyba uga yara daahnay inay dhacdo 16-ka. Marka 23-ka Maarso iyo 30-ka Maarso waa mala-awaal macquul ah. Gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo in shirkaddu caadiyan qabato dhacdooyinka Talaadada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Ku qor taariikhdan kalandarkaaga: Maarso 23-keeda. Dhacdooyinka Apple (ama maahan)
Sida Loogu Yarayn Karo Barnaamijyada Si Toos Ah Icon Dock-kaaga